musha nyika dzakabatana Akasanganiswa Maartist Dustin Poirier Yevacheche Nyaya yeNhau uye Untold Biography Chokwadi
Yedu Dustin Poirier Biography inokuudza chokwadi nezve nyaya yake yehucheche, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki (Jere 'Folley naDarrell), Hupenyu Hwemhuri, Wife (Jolie LeBlanc), Dzidzo.
Uye zvakare, vanun'una vake vaviri, mwanasikana (Parker Noelle Poirier), Lifestyle, Networth, Hupenyu hweMunhu, uye Mubhadharo.
Zvichitaurwa zviri nyore, chinangwa ndechekuburitsa zvakadzama muongorori wemuAmerican musanganiswa wemartial art uye philanthropist. Yedu nyaya inoenderera kubva panguva yekuzvarwa kwake kusvika ave nemukurumbira.
Kugovera yako biography chishuwo, tarisa iyo gallery yezviitiko zvakakomberedza hupenyu hwake kubva pakutanga chaipo. Isu takaona zvakakodzera kuti tikununurire yake Yekutanga Hupenyu uye Kubudirira mifananidzo. Pazasi pane nhanho-nhanho chinyorwa chaDustin Poirier's biography.
Dustin Poirier Biography: Tarisa Hupenyu hwake uye Kubudirira Nhau.
Iye pasina mubvunzo ndiye mumwe weakanakisa akavhenganiswa emasoja maartist kuti apinde mukati meiyo octagon uye nhamba yekutanga muUFC lightweight masosi. Dustin Poirier akabudirira kuzvimisikidza semumwe akaverengwa muNyika yeMixed Martial Arts. Maitiro ake ekurwa anochengeta vateveri vake vari kukura vachifadzwa nguva dzose.
Kunze kwezvaakakudzwa, takaona vanhu vangani vasinganyatsonzwisisa nhoroondo yehupenyu hwake. Nekuda kweizvozvo, isu takafunga kuti zvinoda nemufaro wese kukuunzirai inonakidza ngano yaDustin Poirier uye kuparara kwezviitiko zvebasa rake. Saka, mukuda kwemweya, ngatitangei.
Dustin Poirier Zvekuchecheche Nyaya:
Kune ekutanga biography, isu tichatanga nekutaura nezvenhoroondo yake yekuzvarwa. Dustin Glenn Poirier akauya munyika ino pazuva ra19 Ndira 1989 kuna amai vake, Jere 'Folley Chiasson, uye baba, Darrell Poirier, muLafayette, Louisiana, United States.
Nyanzvi yakasanganiswa nemasoja uye philanthropist akazvarwa pakati pevamwe vake vaviri mukoma nemubatanidzwa wevabereki vake (Darrell Poirier naJere Folley Chiasson) ane mufananidzo uri pazasi.
Tarira vabereki vaDustin Poirier - amai vake, Jere 'Folley Chiasson, nababa vake, Darrell Poirier
Amai vaDustin Poirier, Jere Folley Chiasson, vakaparadzaniswa nababa vake, Darrell Poirier, aine makore mashanu. Nekudaro, kusiya Dustin Poirier kuti akure akatenderedza amai vake (Jere Folley Chiasson), ambuya (Glenn Chiasson), uye vanin'ina vake vaviri.
Wechidiki Chap anga achida kupinda mumhirizhonga kubva paudiki hwake, kazhinji achipinda muchinetso nekuda kwayo. Kurwa kwakamuendesa kunzvimbo dzevasungwa dzeVaduku, kwaaigara nguva zhinji.
Mufananidzo wekutanga waDustin Poirier.
Panguva yegumi, Dustin Poirier akasungwa nekugogodza mazino emwana ane makore gumi nemasere mumutambo wekubheja wenguva pfupi mukati menzvimbo yababa vake uye akaendeswa kumusasa wemauto wemauto.
Asi kune izvo zvese, kunyangwe ruzivo pakamba yebhutsu rwakundikana kushandura maitiro aDustin Poirier maererano nekugadzirisa matambudziko uye kurwisa zvisina basa. Aigara achikurumidza kupindura pakurwa. Pazasi pechikamu chaDustin Poirier pamberi pezita rake.
Dustin Poirier Mhuri kumashure:
Muvhenganiswa wemaartial Artist anobva kumhuri ine hurombo. Nekuti vabereki vake vakarambana kare uye vaifanira kugara naamai vake naambuya, avo vaitambura kuti vawane magumo pamwe nevanun'una vake vaviri.
Dustin Poirier Mhuri Kutanga:
Iyo nhamba-imwe-yakatarwa UFC isina kuremerwa mukwikwidzi ndeyekusanganisa dzinza uye neEuropean-America mavambo. Ipo mai vake, Jere Folley Chiasson, ari muAmerican, wake Baba, Darrell Poirier, vanobva kuFrance.
Akazvarwa muLafayette, Louisiana. Yakatumidzwa zita rekuti "Guta reHub," ndiro guta uye parishi yeLafayette, inozivikanwawo se "Mwoyo weAcadiana." Acadiana izita repamutemo re iyo French Louisiana dunhu iyo ine nhoroondo ine yakawanda yenharaunda yenyika inotaura chiFrench.
Vanhu vanogara imomo ndevekubva kuAcadian (nyuchi yeNew France kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweNorth America). Mazhinji emadzitateguru eAcadian ava anozviratidza saCajuns e Louisiana Creoles.
Dustin Poirier anogovera midzi imwechete neAmerican akasiya basa nyanzvi yakasanganiswa yemasoja uye mutambi weamateur Daniel Ryan Cormier. Pazasi mepu inoratidza mune zvine musoro mazwi mhuri yake midzi.
Mepu inoratidza mhuri yaDustin Poirier.
Dustin Poirier Yekutanga Basa:
Sekureva kwehuremu hwake hweUFC, akatarisana nekurwa kwake kwekutanga muna 2007. Pakutanga aifarira mutambo wetsiva, akasvika pakudzidziswa mumisanganiswa yehondo (MMA) muLafayette mushure mekukweverwa kumutambo uyu.
Semutambi, Dustin Poirier akawana mabhandi maviri pa155lbs. Akakunda mutambo wevarume vasere wakaitirwa muIowa. Uye zvakare, Poirier ane bhandi reBrown muBrazilian Jiu-Jitsu uye bhandi dema muRex Kwon.
Dustin Poirier, akatarisana nehondo yake yekutanga muna 2007.
Sezvakataurwa naDustin, aive achiunganidza magaba ealuminium uye mapecans asati aenda mumutambo wekurwa.
Hasha dzake nehusimbe zvaive mukana wekuwedzera kwaari. Akashandura hunyanzvi muna2009, achikwikwidza zvakanyanya mukusimudzira matunhu kudunhu rake reLouisana neSouth United States.
Dustin Poirier Dzidzo:
Sezvinowanzo danwa nevazhinji vateveri vake, iyo Diamond yakaratidza zviratidzo zveye mutsimba murwi uye murwi achiri ku High School. Aivewo anofarira zvemitambo uye aiita mitambo yakasiyana siyana, kusanganisira nhabvu, tsiva, uye Wrestling.
Dustin Poirier akapinda chikoro cheNorthside High, chikoro cheveruzhinji kuchamhembe chikamu cheLafayette, Louisiana, United States. Asi kune izvo zvese, mugiredhi rake re9th. Akadonha nekuda kwematambudziko ake mazhinji uye nhamo yaive kumashure.
Pane imwe nguva Paakabvunzwa nezve ake koreji kudzidza uye madhigiri mubvunzurudzo yeUFC, akapindura kuti akabereka doctorate kubva kuChikoro chekuoma kugogodza. Chokwadi, akashandisa zvakanaka mamiriro ake akashata.
Iko kumberi kuona kweDustin's High Chikoro.
Dustin Poirier Biography - mugwagwa unoenda mukurumbira:
Mutambi weEuropean- American UFC akapinda muWorld Extreme Cagefighting (WEC). Akatanga nekurasikirwa pazuva regumi nesere raAugust 18, paWEC 2010 asi akazokunda Zach Micklewright kuburikidza neyekutanga TKO pazuva regumi nerimwe raNovember 50, kuWEC 11.
Kubatanidzwa kweWEC neiyo 'Yekupedzisira Kurwira Makwikwi' (UFC) muna Gumiguru 2010 kwakatungamira kuchinjiswa kwake kuUFC. Yakakodzera kucherechedzwa yaive kurwisa kwake Jung Chan-Sung muna Chivabvu 2012. Vakakudza kurwa se'Kurwa kweGore 'nemabhuku mazhinji.
Akave akarongedza iyo 'Performance of the Night mubairo kaviri vachipesana naCarlos Diego Ferreira uye Yancy Medeiros mu2015.
At Performance of the Night mubairo.
Dustin Poirier Biography- kumuka kune mukurumbira:
Achirwira nzira yake kuenda kumusoro, Iyo yeEuropean-American Professional akachengeta kuda kwake, achityairwa nemhuri, rudo, uye kubudirira. Mazhinji mamwe ekupedzisira Ekurwira Makwikwi (UFC) kukunda akauya. Akazvimisira rekodhi inonakidza.
Yake MMA rekodhi kubva muna Chikunguru 2021 ndeye makumi maviri neshanu anokunda pamitambo makumi matatu nemana, aine gumi nematanhatu nekugogodza, manomwe nesarudzo, uye manomwe nekutumira. Uye zvakare, pamwe nekurasikirwa katanhatu. Sebhiri rekutanga rebvumirano yake nyowani, Poirier akatarisana naConor McGregor mukudzokorodza kwavo 27 bout kuUFC 34 pazuva re13 raNdira 2014.
Akawana kukunda nekugogodza kwehunyanzvi muchikamu chechipiri, achibuda semunhu wekutanga kukunda McGregor nekugogodza. Kukunda kwakamuwanisa iye Performance yeiyo Husiku mubairo.
Akawana kukunda nekugogodza kwehunyanzvi mune yechipiri kutenderera,
Poirier akatarisana naMcGregor kechitatu pazuva regumi regumi raChikunguru 10 kuUFC 2021. Poirier akakunda kurwa kwakatenderera nekumira kwechiremba mushure mekunge McGregor akuvara gumbo (rakatyoka tibia) uye akatadza kuenderera.
Kunyange zvakadaro, Conor anosimbirira kuti shin rake rakatsemuka Pamberi pekurwa naDustin Poirier, achiri kutarisira mutambo wekutsiva.
Mushure mekunge McGregor atambura kukuvara kwechidzitiro (akatsemuka tibia) uye akatadza kuenderera.
Dustin Poirier akabudirira kuzvimisikidza se # 6 muUFC yemurume pondo-ye-pondo masosi uye se # 1 mune yepamutemo UFC lightweight masosi, zvichiteerana, sezuva regumi nemana raJune 13.
Ndiani murume / mukadzi wake?
Iyo Diamond yakaroora kune yake yakareba kwenguva refu chikoro chepamusoro mudiwa Jolie Le Blanc uye vaviri vacho vanoita kunge vane hupenyu hunofadza. Pasinei neizvozvo, mukadzi ane mukurumbira anofarira kuchengeta chimiro chisina kudzika.
Kunyatso tsvagisa neboka redu rine tarenda inofungidzira kuti mambure aJolie Poirier anokosha kubva muna 2021 ari kumwe kunenge madhora zviuru zana. Poirier anoshandisa yakawanda yenguva yake mutaundi rekwake nemukadzi wake, Jolie Poirier, nemwanasikana wavo (Parker Noelle Poirier).
Dustin nemudiwa wake wenguva refu wepachikoro chepamusoro Jolie Le Blanc
Jolie akaroora Dustin Poirier pazuva rechina raGunyana muna4. Iye akazvarwa muNyika pazuva rechina raKurume 2009 kuvabereki Carl LeBlanc naTeri. Moreso, ane vanin'ina vaviri, Javen naJandy. Moreso, vese zvizvarwa zveLafayette futi.
Iye anotarisira chikamu chebhizinesi chezvinhu zverudo rwavo- Iyo Yakanaka Hondo Nheyo. Jolie ndiye mubatanidzwa weiyo isiri-purofiti institution yakavambwa pamwe chete nemurume wake. Iyo 'Diamond' inogara ichiti mukadzi wake nekumubatsira kuti akunde nemamiriro mazhinji anonyengera.
Vana vaDustin Poirier:
Jolie Poirier akabereka mwanasikana, Parker Noelle Poirier pazuva rechimakumi maviri raNyamavhuvhu muna20, makore manomwe mushure mekuroora kwavo. Poirier anonzi akadzidza nezve nhumbu yaJolie chete muna 2016, nguva pfupi asati arwa naJoe Duffy kuUFC 2016. Aiita kunge akabatikana nekurwa kwake panguva iyoyo.
Saka, saJolie, Dustin akanamatirana nemwanasikana wake, izvo zvakamuwanirawo iye 'pano neapo zita remadunhurirwa'- Baba vaParker, vaanoda zvakanyanya. 'Iyo Diamond' inogara ichitaura kuti anorwira mhuri yake, uye kuvaona kunomukurudzira zvikuru.
Wechidiki Parker Noelle Poirier mumaoko ane rudo evabereki vake.
Dustin Poirier Hupenyu Hwemhuri:
Nhoroondo inorondedzera kuti kurwa sebasa kwakapararira mumhuri yaDustin Poirier. Fungidzira kuti inomhanya muropa; baba vake nasekuru nasekuru vaive varwi, futi.
Zvisinei, hapana kana mumwe wavo akazoita mukurumbira saDustin. Tora piritsi inotonhorera patinofukura kuparara kwenhengo yega yega yemhuri.
Zvimwe pamusoro paDustin Poirier Baba - Darrell Poirier:
Baba vaPoirier Darrell aivewo murwi saiye, kunyangwe isu tichingoziva zvishoma nezvake. Dustin Poirier anonzi anozviti murwi wechizvarwa chechitatu, zvichireva kuti tinogona kuronda midzi yake yekurwira kudzokera kuna sekuru vake.
Akawira murudo uye akazoroora amai vaDustin, Jere Folley Chaisson. Kunyangwe yakaparadzaniswa, mubatanidzwa wakaburitsa vana vatatu (3) vana avo Dustin anoita kunge ane mukurumbira.
Dustin nababa vake - Darrell Poirier.
Zvizhinji nezvaDustin Poirier Amai - Jere Folley Chaisson:
Amai vaDustin Poirier, Jere Folley Chaisson, akasiya Baba vake, Darrell Poirier, nguva refu yapfuura. Amai vake nababa vakarambana aine makore mashanu chete. Jere akabva asimudza Dustin, pamwe nevakoma vake vaviri.
Saamai vane hanya, akaita nepaaigona napo kuona kuti vana vake vaine hupenyu hwakanakisa uye vakawana mikana iri nani. Kunyangwe, kugona kwake kwanga kusingakwanise. Kushaikwa kwemari kwakabatsira kuti Dustin asiye chikoro.
Amai vaDustin Poirier, Jere Folley Chaisson naDustin.
Zvimwe pamusoro paDustin Poirier Vanun'una:
Sezvatakambotaura kare, Dustin Poirier ane vamwe vanun'una vaviri. Kunyangwe zvisiri zvakawanda zvatinoziva nezvehama mbiri dzaDustin Poirier. Zvisinei, ivo vari zvakare kubatanidzwa mukutsigira iro raDustin rinobudirira kurwira basa.
Dustin mumufananidzo frenxzy nevanin'ina vake.
Zvizhinji nezveDustin Poirier Vehukama:
Poirier zvirokwazvo ane dzimwe nhengo dzemhuri kunze kwevabereki vake uye hama. Nekudaro, isu hatina ruzivo rwakakwana maererano navo. Mukupesana, sekureva kwaDustin, iye murwi wechitatu-chizvarwa. Sekuru vake veFrance, zita risingazivikanwe, vangangodaro vakapinda muzvindori.
Dustin Poirier Hupenyu hweMunhu:
IAmerican Champ mudiki uye anoyevedza mukwikwidzi wemitambo aine Muzvarirwo yemitambo muviri kuvaka. Zvisineyi, kunyangwe yepasi rose kirasi yakavhenganiswa yemasoja inoda imwe nguva yekuzorora. Dustin Poirier anonakidzwa nekugara akagwinya nekubata kwake mune yekurovedza muviri.
Anofarira bhora uye kuchovha bhasikoro. Uye zvakare, Wrestling uye tsiva zvinoramba zviri simba rake. Iyo 'Diamond' munhu akanaka anozivikanwa pane vezvenhau. Iye ane fan hombe anotevera pa Instagram, kwaanogara achigovana zvemhuri yake, kusanganisira mifananidzo nemukadzi wake Jolie nemwanasikana Parker Noelle.
Dustin Poirier Mararamiro:
Dustin akazviratidza kuve mumwe weakanakisa akavhenganiswa emasoja, akabata zvinyorwa zve 27-6-0 muUFC. Kuita kwake kwakasarudzika mukati mekheji kwakamutendera kuti awane mamirioni emadhora kubva kuiyo franchise.
Nekudaro, hazvishamise kuwedzeredza uye kubwinya kwaanoratidzira paanoshandisa mari yake, kunyanya kuMumba, Mota, Watches, zvishongo, uye Charity.
Naiye wake Rolex Oyster zuva risingaperi ingori wristwatch inokosha $ 12,000.
Mumakore ese, Dustin akazviunganidzira mota dzakasiyana siyana. Yake mota muunganidzwa inozvirumbidza neRolls Royce Ghost Series 2 inokosha $ 311,000 uye yakasarudzika Ferrari 458 Italia inokosha madhora 245,000.
Unganidzo yemota yaDustin inosanganisira zvakare Cadillac CT6 uye Dodge Challenger, inodhura madhora zviuru makumi maviri nezviviri. Ane midhudhudhu mishoma.
Collage inoratidza muunganidzwa wemota shoma dzemhando yepamusoro dzaanadzo.
Mari yaanowana inouya kubva pakuve murwi akabudirira. Isu takafungidzira iyo Dustin Poirier mambure akakosha uye muhoro zvinotevera. Sekureva kweSuva, mambure ake anokosha anomira pamadhora mazana mana emadhora (mamirioni 4).
Moreso, Poirier akaita anodarika $ 1m muchikwama chake chekupedzisira kurwisa McGregor pakutanga kwa2021- iyo yaakakunda nekumira kwechipiri-kutenderera. Nekudaro, muhoro wake, zvinoenderana nemitambo mazuva ese, ingangoita $ 1,021,000 ($ 1,000,000 yeiyo show uye $ 21,000 sekurwa vhiki rinokurudzira mubhadharo).
Zvipfeko zvemitambo zveReebok zvepasirese zvinotsigira iyo UFC, saka ivo vanopa kodzero murwi wega wega, ivo vanofarira ve Khabib Nurmagomedov uye Nate Diaz kune chimedu chekeke ravo. Mukupesana, Dustin haasiyane uye akaita mari yakawanda kubva kuchitengesi seKushanda uye kuhwina mabhonasi.
Akazviitira iye anodarika miriyoni yemadhora kubva kumakambani ake emuchina. Dustin anofarirawo hupfumi hwezvimwe zvigadzirwa zvechigadzirwa, zvinosanganisira zvipfeko, Robert Graham, Bvudzi Trimmer Yekushambadzira chiratidzo, Sports Drink Company, Celsius Energy Drink, hutano uye Wellness trademark, Therabody Sports, Conair Man, pakati pevamwe vanoverengeka.
Kutsigirwa kwaDustin - neCelsius Energy Kunwa.
Dustin Poirier Untold Chokwadi:
Kunze kwenyaya yehupenyu yakataurwa kusvika parizvino, hezvino zvinonakidza Chokwadi Pamusoro paDustin Poirier nebasa rake rekumhanya.
Chokwadi # 1: Mudzimai waDustin Poirier anobvisa Conor McGregor:
Pamberi pekurwa kwaDustin naConor McGregor, akazvirova dundundu pamusoro pekuti Jolie Poirier, mukadzi waDustin, akapinda sei muDM yake pa Instagram. Uye zvakare, Gregor akataura nezvekuti mubhedha waizotora sei Dustin mushure mehondo. Nekunakidzwa, iyo yekumashure yaive iyo kesi.
Pakupera kwehondo, ivo vakabatsira McGregor kunze kweT-Mobile Arena. Mushure mekudonha munharaunda yekutanga vachipesana naPoirier, akatambura tibia yakaputsika uye akazonzi akarasika.
Nekudaro, iro ropa rakaipa rakadeuka pamusoro peshure-kurwa, zvichitungamira Mukadzi waDustin Poirier kuti abvise Conor McGregor, achinamatira munwe wake wepakati kumusoro kwaari paakatadza kusimuka.
Dustin Poirier nemukadzi wake Jolie mushure mekunge Poirier akunda Conor McGregor kuUFC 264 muna Chikunguru 10, 2021.
Chokwadi # 2: Unyanzvi:
Dustin Poirier ndemumwe wevanonyanya kufarira mutambo weUFC mumitambo uye akabatsira kusimudzira hupenyu hwevanhu vazhinji panguva yese yebasa rake. Poirier nemukadzi wake, muna Kubvumbi 2018, vakatanga iyo "Yakanaka Hondo Nheyo," uye kusvika zvino vabatsira kuunganidza mamirioni emadhora.
Pa 26th zuva raJune 2020, Poirier akapihwa Forrest Griffin Nharaunda kukudzwa neUFC yebasa rake rerudo.
Dustin Poirier's Isingabatsiri Investment Iyo Charity Inoshanda.
Chokwadi # 3: Fightville:
Akatanga kuita filmography muna 2011 nefirimu Fightville. Zviratidzo zvePoirier's early Mixed martial arts (MMA) basa muLouisiana rinoratidzwa mune zvinyorwa. Iyi firimu yaive yakatungamirwa naMichael Tucker naPetra Epperlein.
Iyo yakavhenganiswa yemartial arts yakanyorwa inoongorora chiitiko chiri kuseri kweiyi yakazara-yekubatana yekurwira mutambo kumaodzanyemba kweLouisana. Yakaratidza kubvunzurudzwa kwake pakati pekubvunzurudzwa kwevamwe varwi uye varairidzi. Pazasi pane terevhuru yepamutemo yezvinyorwa.
Chokwadi # 3: Kudzidziswa:
Dustin akadzidziswa kuGladiators Academy pasi pemudyandigere weMMA murwi Tim Credeur. Zvisinei, mushure mekurasikirwa kwake naChan Sung Jung, Poirier akatamira kuAmerican Top Team (ATT) muSouth Florida. Mudzidzisi wake ndiPhil Daru. Moreso, iye zvino ava nedzidzo yake inonzi iyo Diamond Training Center.
Chokwadi # 4: Tattoo:
Dustin akawana tattoo yake yekutanga aine makore gumi nemana. Parizvino, maoko ake uye chipfuva chake zvakafukidzwa mumatanho anosvika makumi maviri nemanomwe, kusanganisira rimwe pachifuva chake muchiJapan iro rinoti 武士道 (bushidō), zvinoreva kuti "nzira yevarwi". Uye zvakare, imwe yetatoo yake ine zita remwana wake wekutanga, Parker Noel.
Dustin akafukidza maoko ake uye chipfuva zvakafukidzwa mune angangoita 27 maTatoo.
Chokwadi # 5: Bhizinesi zviitiko:
Pazuva rechisere raZvita 8, Poirier akazivisa paTwitter kuburitswa kwechigadzirwa chake chitsva chesauce inopisa muto inonzi Poirier's Louisiana Style yakabatana nekambani yeCanada, Heartbeat Hot Sauce Co Iyo yakakosha Heatonist K. O edition yakaburitswa muna Chikunguru 2020. .
Dustin aine yake itsva cajun inopisa muto muto inonzi Poirier's Louisiana Style.
Chokwadi # 6: Anodiwa nevazhinji maAsia:
Murwi anoonekwa padivi pemureza wePhilippines kakawanda, achisiya vateveri vake vakawanda pasirese vachifungidzira hukama pakati pake nenyika. Pasinei naizvozvo, chaingova chibvumirano chekutsigira kana nyaya yesarudzo yake.
Kunyangwe Dustin achiratidzika kunge anonakidzwa netsika nemagariro eAsia, iye muEuropean-America uye kwete anobva kuAsia.
Dustin anoita kunge anonakidzwa netsika nemagariro eAsia.
Dustin Poirier Biography Pfupiso:
Kuti uwane pfupiso inokurumidza yenhoroondo yehupenyu hwake, shandisa tafura iripazasi kuti uwane ruzivo rwakajeka nezveiye akakurumbira weAmerican nyanzvi akasanganiswa nemasoja uye philanthropist.
Dustin Poirier Bio Dhata
Zita rizere: Dustin Glenn Poirier
Zita rekudanwa: Dhaimondi, Salon Yemhando, Poirier
Zuva rekuzvarwa: 19 Zuva raJanuary 1989
Nzvimbo yekuzvarirwa: Lafayette, Louisiana, United States
Basa: Akasanganiswa murwi muimbi uye Philantropist
Dzidzo: Northside High Chikoro
Baba: Darrell Poirier
Amai: Jere Folley Chaisson
Wife / Wawakaroora: Jolie LeBlanc
Mwanasikana: Parker Noelle Poirier
kukwirira: 5 ft 9 inches (1.75 m)
Muhoro: $ Miriyoni makumi maviri (1.2)
Net Worth: $ Miriyoni makumi maviri (4)
Kunobva Pfuma: Professional Mixed martial artist (UFC), Endorsements, Bhizinesi, Media zvigadzirwa
Philanthropy: Iyo Yakanaka kurwa Nheyo
Dzinza / Race: European -America
Residence: Maodzanyemba Florida, US / Imba muLas Vegas, Nevada
Social Media: Facebook - https://www.facebook.com/DustinDiamondPoirier
Instagram - https://www.instagram.com/dustinpoirier
Twitter - https://twitter.com/DustinPoirier
Isu tinovimba wawana Dustin Poirier Biography uye Yevacheche Nyaya ichizarura uye izere nezvidzidzo. Kunyangwe aive nehurombo kumashure, uye kurambana kwekutanga kwevabereki vake, Dustin Poirier akaramba kurega kutsvaga kwake kwekubudirira. Akaramba achivavarira kuve nani pane ese mukana wake.
Hunhu hwake hwekumanikidza uye hupenyu hwehasha hwakabhadharwa, pakupedzisira. Uye zvakare, isu tinotarisira mutambo wechina na Conor McGregor, mhedzisiro yacho yaizopa Dustin nhoroondo inogara kana akakunda. Ita zvakanaka kuti ugare wakabatana kune hwakawanda biography chokwadi neepamusoro-notch kunyatso.